अब मलेसियाका यस्ता कम्पनीमा मात्रै नेपाली जान पाउने ! - jagritikhabar.com
अब मलेसियाका यस्ता कम्पनीमा मात्रै नेपाली जान पाउने !
मलेसियाको सोसल सेक्युरिटी अर्गनाइजेसन (सोक्सो) सँग थप छलफल गरिने र छलफलपछि सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था भएका कम्पनीमा मात्रै नेपाली श्रमिक पठाइने बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठले बताए।
सम्झौता भए पनि कोरोनाका कारण तत्काल नेपालीहरू सोक्सोमा समेट्न नसकिएको बताइएको छ। बोर्डका अनुसार सोक्सोमा आबद्ध भइसकेपछि श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको १.२५ प्रतिशत बराबर रकम प्रत्येक महिना रोजगारदाताले आफ्नो तर्फबाट सोक्सो कोषमा जम्मा गरिदिने व्यवस्था छ।
श्रमिक सूचिकृत भएपछि करार अवधिभित्र कार्यस्थल दुर्घटनामा परेमा, अंगभंग भएमा तथा बिरामी भए उपचार व्यवस्था सोक्सोले गरिदिन्छ। सोक्सोमा आबद्ध आप्रवासी श्रमिकले ‘इम्प्लोइमेन्ट इन्जुरी स्किम फर फरेन वर्कर्स’ योजना अन्तर्गत सामेल हुन पाउँछन्। योजना अन्तर्गत श्रमिकलाई कार्यस्थलमा हुने दुर्घटना वा कार्यस्थलका कारण कुनै रोग लागे सोवापत तोकिएको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइन्छ।
यो योजनामार्फत स्वास्थ्य, अस्थायी तथा स्थायी अक्षमता र आश्रित सुविधा, निरन्तर उपस्थित भत्ता, अन्त्येष्टि खर्च तथा पुनर्स्थापना सुविधा व्यवस्था छ। उल्लेखित सुविधा कतिपय श्रमिक आफैं तथा श्रमिकका परिवार वा रोजगारदातालाई उपलब्ध हुनेछ।श्रमिकका हकवालालाई सुविधा उपलब्ध गराउन सोक्सोले परिवारको लगत अद्यावधिक गर्ने काम गरिरहेको छ।
अद्यावधिक काम वैदेशिक रोजगार बोर्डको सहयोग तथा दूतावासको समन्वयमा गरिने बोर्डले जनाएको छ। सोक्सोमा आबद्ध भएपछि मलेसियाका विभिन्न कम्पनीमा कार्यरत नेपाली श्रमिक दुर्घटनामा वा बिरामी परेमा निःशुल्क उपचार सुविधा प्राप्त गर्नेछन्। यो सुविधा पाउन श्रमिकले मेडिकल रिपोर्ट, परिचय पत्रको प्रतिलिपिसहित दुर्घटना रिपोर्ट फारम भरेर सोक्सो कार्यालयमा पेश गर्नुपर्छ।